FIFA “ciyaar wanaagga xulka Soomaaliya waa caddeyn muujinaysa dib u kabashada Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA FIFA “ciyaar wanaagga xulka Soomaaliya waa caddeyn muujinaysa dib u kabashada Soomaaliya.
FIFA “ciyaar wanaagga xulka Soomaaliya waa caddeyn muujinaysa dib u kabashada Soomaaliya.
Wiilasha Mucjisada ah ee Soomaaliya oo ku haminaya in ay taariikh hor-leh sameeyaan.
Oraahdaan soo jiidashada leh waxaa lagu qoray Website-Ka xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta adduunka ee FIFA, waxa ay cadeyn u tahay in ay Soomaaliya dib u soo laabatay oo markan aysan aheyn sidii hore.
Guushii geesiyada Xulkeenu ay ka gaareen dhiggooda Zimbabwe waxa ay abuurtay taariikh cusub oo lagu rajo weynyahay in ay Lugta Labaadee ciyaartaan in ay abuurto taariikh ku qoran boggaga caalamiga ah iyo mida dalkeenna, sidoo kalena cashar u ah jiritaanka taariikhda kubbadda cagta dunida.
Wiilsha Qarankeena oo kulankii lugta hore ee Isreebreebka koobka adduunka 1-0 afka ciidda ugu daray dhiggooda Zimbabwe ayaa galabta markale rajeynaya in ay libin kala soo laabtaan garoonka National Stadium ee magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe, taas oo noqon doonta mucjiso kale oo ay dhigaan xiddigaha xulka Qaranka Soomaaliya oo laga soo kala xulay gudaha dalka iyo dibaddiisaba.
Tababaraha reer Ghana ee hogaaminaya xulka Qaranka Soomaaliya Bashir Hayford ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay kulanka ay galabta wajihi doonaan xulka Zimbabwe, wuxuuna sheegay inay si weyn u diyaar garoobeen, isla markaana ay sameyn doonaan wax walba oo ay ku guuleysan karaan.
Tababaraha xulka Zimbabwe Joey Antipas oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa wel wel ka muujiyay kulanka galabta dhici doona, waxa uu tilmaamay in aan la sahlan karin bandhigga iyo xirfada cajiibka ah oo ay soo bandhigeen xulka Qaranka Soomaaliya, isagoo xulkiisa kula taliyey in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan si ay u aargutaan.
Madaxda ugu sareeysa dalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa hiil iyo duco la garab taagan Xulka Qaranka, iyadoo ay xusid mudantahay in dhallinyaro badan oo iskood isku abaabulay ay kasoo ambo baxeen dalal badan oo ay ka mid yihiin Zambia, Mozambique iyo South Afrika si ay u garab istaagaan xulkeena Ocean Stars oo talaabo u jira inay usoo baxaan wareega xiga ee isreeb reebka koobka dunida ee sanadka 2022 lagu qaban doono dalka Qatar
Previous articleRa’iisul wasaare Kheyre oo gaaray Xudur.
Next articleTiro ka mid ah nabad diidka Arxanka daran ee Al-Shabaab oo la dilay iyo hub laga furtay